🥇 ▷ Kamera: Sawirro ka qaad iyada oo aan waqti kaaga lumin Tweak-ka cusub [Vídeo] ✅
Kamera: Sawirro ka qaad iyada oo aan waqti kaaga lumin Tweak-ka cusub [Vídeo]
Wax soo saarka Jailbreak ee macruufka 6 wuxuu galiyay xirmooyin soosaarayaasha Cydia, kuwaas oo maalmahan ay bilaabayaan dib u cusbooneysiin badan iyo qaabab cusub oo leh astaamo aad u xiiso badan. Markan waxaan ka wada hadli doonnaa Kamera, tweak-ka kaas oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u hawlgasho kamaradda, ama kamarad hore ama kamaradda gadaal.
Kamera waxaad ku dari doontaa widget a xarunta ogeysiinta oo aan ku dhaqaaqi karno kamaradaha iPhone, waxa ugu gaarka ah ee ku saabsan tweakkaan waa xaqiiqada aan dooran karno haddii aan dooneynno inaan sawir ku qaadno kamaradda hore ama gadaal, ka hor intaadan furin codsi.
Bartamaha wax ka badalida waxaan ku arki laheyn labo badham, sida aan ku arki karno sawirka, mid leh “kamarada hore” ama kamarada hore iyo kan kale oo leh “Rear Camera” ama kamarada gadaal. Tani dhab ahaantii waxay ka dhigeysaa wax ka badan mid ka mid ah kuwa jecel jacaylka sawir qaadista leh ee leh iPhone waxay lumineysaa waqti luminta kamaradda ka dibna aad doorato midka aad rabto inaad isticmaasho.
Kadib waxaan kugu dhaafin doonaa muuqaal fiidiyoowga ah oo shaqeynaya.
Kamera ayaa bilaash looga heli karaa Cydia, oo ku dhex taal bakhaarada BigBoss.
Xusuusin: Marka la rakibo kadib waxaa lagama maarmaan ah in la aado barnaamijyada ‘iPhone Settings’ oo qaybta qaybta ogeysiinta ah la raadi ikhtiyaarka “Kamera” ka dibna dooro oo riix ikhtiyaarka “Ogeysiiska Xarunta” si aad ugu muuqato.